Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Ihe akaebe: Ikpuchi ihe nkpuchi na-azọpụta ndụ
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa akụkọ Canada • Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! • Education • News • Mgbasa Ozi • Ndi akuko • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
nbudata 2020 08 11 na 9 15 07 na
Ndị dọkịta Ontario na-ekwu na ikpuchi mkpuchi ma ọ bụ mkpuchi ihu ọzọ bụ otu n'ime ihe kachasị mfe ma dị irè onye ọ bụla nwere ike ime iji kwụsị mgbasa nke COVID na ịchekwa ndụ.
Ndị dọkịta na-arụ ọrụ n'ahịrị n'ihu nke ọrịa a na-echegbu onwe ha gbasara nzukọ ndị mmadụ mere n'oge na-adịbeghị anya site n'aka ndị mmadụ na-azọrọ na mkpọchi mgbochi na mgbochi bụ ihe iwu akwadoghị ma na-akpata mmerụ karịa nke ọma.
Nchegbu a toro na akụkọ karịrị 1,800 Ontarians nwalere COVID maka ụbọchị nke abụọ.
Na mgbakwunye na ịgbasa akụkọ na-abụghị eziokwu, ngagharị ndị ahụ agafeela ntuziaka gọọmentị banyere oke nnọkọ n'èzí na ole na ole n'ime ndị sonyere na-eyi mkpuchi. “Ihe nkpuchi m na-echebe gị ma ihe nkpuchi gị na-echebe m,” ka Dr. Samantha Hill, onye isi oche nke Medicallọ Ọrụ Ahụike Ontario kwuru. “Ihe omumu sayensi doro anya.
Agba ihe mkpuchi bụ otu n’ime ihe ndị kachasị mfe ma dị irè nke onye ọ bụla n’ime anyị nwere ike ime na nke o kwesịrị ime iji belata ihe egwu nke ịgbasa ma nwudo COVID-19. na-ejide nje. Masks na-ebelata mgbasa nke COVID-19 site na igbochi ụmụ irighiri ọrịa ahụ si na imi na ọnụ gị.
Imirikiti ndị mmadụ anaghị achọ ihe nkpuchi ahụike, nke ekwesịrị idobe ya maka ndị ọrụ nlekọta ahụike na ndị ọzọ na-aza ajụjụ mbụ. Maka ihe nkpuchi ga-akacha dị irè, ndị dọkịta Ontario na-atụ aro: Mkpokọta ahụike ma ọ bụ ihe mkpuchi ihu kwesịrị ka ọ dịkarịa ala okpukpu atọ nke akwa kpara akpa, buru oke ibu iji kpuchie imi na ọnụ kpamkpam, dabara nke ọma ma debe ọdịdị ha mgbe saa. You kwesịrị ịsa aka gị tupu i tinye ihe mkpuchi ihu na mgbe ị wepụsịrị ya.
Cheta na mpụga nke nkpuchi ma ọ bụ mkpuchi na-ahụta dị ka ihe ruru unyi. Agbanyela mkpuchi ihu gị ma ọ bụ metụ ya aka n'ụzọ ọ bụla mgbe ị na-eyi ya. Ekekọrịtala nkpuchi gị. You wepụsịrị ya, saa ya na mmiri ọkụ ma ọ bụ tụpụ ya. Ekwesighi mkpuchi ma ọ bụ mkpuchi ihu na onye ọ bụla nọ n'okpuru afọ 2 ma ọ bụ onye ọ bụla nwere nsogbu iku ume ma ọ bụ amaghị ihe ọ bụla, enweghị ike, ma ọ bụ enweghị ike iwepu nkpuchi ha na-enweghị enyemaka.
Na mgbakwunye na ikpuchi ihe mkpuchi, ndị dọkịta Ontario na-echetara ndị Ontaria niile ka ha gaa n'ihu na-eme ka ndị ezinụlọ na-ezukọ na-ezukọ n'ụlọ, na-akwọ aka gị oge niile ma na-anọkarị mita abụọ site na onye ọ bụla ị hụrụ n'èzí.
Ndị Ontaria niile nwere ọrụ na ọrụ iji rụọ na igbochi ọrịa a ma na-etinye ihe nkpuchi bụ akụkụ ya, "Onye isi OMA Allan O'Dette kwuru. "Ontario'sdoctors sonyeere Premier Doug Ford rịọrọ ịgbaso usoro ahụike ọha na eze iji mee ka ahụike na akụ na ụba anyị laghachi na egwu ngwa ngwa o kwere mee."
Blossom Night Nightless ọbara Reviews - Mkpesa ojoro ma ọ bụ ihe eji arụ ọrụ na-arụ ọrụ n'ezie?
Oti mkpu nke ruuru mmadụ na Uganda